Ka bogo Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulammadii xalay lagu soo xiray horyaalka Premier League – Gool FM
(London) 23 Maajo 2022. Horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa xalay la soo gabagabeeyey xilli ciyaareedkiisa 2021/22, waxaana uu ahaa midkii ugu xiisaha badnaa ee lagu tartamo hanashada horyaalka.
Kooxda Manchester City ayaa ku guuleysatay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan markii ay lixdaqiiqo wax ka yar ku dhaliyeen saddex gool, iyadoo ay soo laabasho cajiib ah ku sameeyeen naadiga Aston Villa oo lagu gool kala hormartay.
Geesiga Man City ee kulankan waxa uu ahaa Ilkay Gundogan oo labo gool dhaliyey, sidoo kale Rodri ayaa goolka barbaraha u keenatay Sky Blue, sidaas ayayna Manchester City ku qaadday koobka horyaalka Premier League markeedii afaraad shan sanadood gudahood.
Manchester City ayaa kulankan macasalaamaysay halyeyga reer Brazil ee Fernandinho oo muddo sagaal sannadood ah ka ciyaaray garoonka Etihad.
Dhanka kale Kooxda Liverpool ayaa iyaduna guul soo laabasho ah ku soo gabagabaysatay horyaalka Premier League, waxaanay 3-1 ku garaaceen Wolves oo gool kala hormartay.
Kulankii ka dhacay Anfield waxaa saddexda gool u kala dhaliyey Liverpool Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Andy Robertson, sidoo kale waxa ay habeen gaar ah u ahayd Divock Origi lagu sagootiyey saf-sharafeed markii uu kulanku soo dhammaaday.
Kooxda Arsenal ayaa dhankeeda gudaha garoonkeeda sagootin ugu samaysay kabtankeeda Alexandre Lacazette oo isaguna si xor ah uga tegaya garoonka Emirates.
Geesta kale kooxda Leeds United ayaa sii joogtay horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska ee Premier League kaddib markii ay guul 2-1 ka gaartay Brentford, waxaana heerka labaad inay u laabatay xalay xaqiijisay Burnley oo guuldarro 2-1 ah ay ka soo gaartay naadiga Newcastle United.
Burnley, Watford iyo Norwich City waa saddexda kooxood ee u laabtay horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska, isla markaana ay horyaalka Premier League lagu arki doonin kal ciyaareedka soo aaddan.
Maalin xanuun badan ayay u ahayd Manchester United, iyadoo guuldarro 1-0 kala kulnatay Crystal Palce oo ay marti u ahayd, waxaana loo diiwaan geliyey rikoorkii ugu xumaa muddo 40 sanadood ka badan, iyadoo kulankan uu goobjoog ahaa oo uu daawanayey Macallinkooda cusub ee Erik Ten Hag.
Waxay tani ahayd guuldarradii lixaad ee isku xigta ee ay kala soo kulanto kooxaha ay martida u noqoto ama ay booqato Man United, waana markii ugu horreysay ee ay sidani ku dhacdo tan iyo sanadkii 1981-kii.
Maadaama laga adkaaday West Ham United, isla markaana ay guuleysatay Tottenham oo u soo baxday Champions League xilli ciyaareedka soo socda, labada kooxood ee Arsenal iyo Man United ayaa ka wada ciyaari doona tartanka Europa League xilli ciyaareedka soo socda.